Ngo-Okthoba 2019 - RayHaber
Izinyanga: Okthoba 2019
wokuqala oyimfihlo zendawo nezikazwelonke Udizili Engine Factory eTurkey 'Yavuz Engine'. I-Yavuz Engineering Industry and Trade Inc. Izisekelo zeTurkey motor Industry (TÜMOSAN) zasungulwa nguProf.Dr.Sedat Çelikdoğan ongasekho e1991. I-Sedat Çelikdoğan, i-1975 eminyakeni engu-76-100.000 [Okuningi ...]
IDenizli Cable Car kanye neBağbaşı Plateau, lapho uMasipala weDropropitan waseDenizli efaka khona umsebenzi ngenhloso yokucebisa izimpilo zezakhamizi nokuchitha isikhathi ezindaweni ezihlangene nemvelo, kusale unyaka we-4. Ngaphezu kwezigidi ze-2,5 kuze kube manje [Okuningi ...]
Umasipala wase-Erzurum Metropolitan, amanethiwekhi ezokuthutha kuleli dolobha, kanye nezifunda eziphakathi nendawo kanye nemizana exhunywe kwimigwaqo enikeza ikhwalithi. Uzunahmet Group Road, ohlanganisa izindawo ezakhele i-Uzunahmet, Nebihanlar, Pusu Deresi, Sığırlı kanye no-Şehit Burak Karakoç [Okuningi ...]
UMasipala Metropolitan, osheshise ukwakhiwa kwezinye izindlela neminye imigwaqo exhumanisa ne-Ankara, uqede imisebenzi yokuxhumanisa iBeytepe Campus yaseHacettepe University neSabancı Boulevard. Amamitha we-3 ayinkulungwane amamitha we-50 anemigwaqo eseceleni kufaka phakathi uhambo oluyindilinga [Okuningi ...]
UMasipala waseKocaeli Metropolitan, izakhamizi ezizohamba ngokunethezeka ekwakhiweni komgwaqo nakulungiswa ziyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka. INihal Atsız Caddesi ne-Alparslan etholakala phakathi kweHacı Osman kanye ne-İlimtepe Omakhelwane besiFunda saseKörfez [Okuningi ...]
E-2022, kwenziwa isivivinyo sokuqala emgqeni wesitimela ohamba ngesivinini esikhulu iBeijing-Zhangjiakou, ngesinye sezindawo ezinkulu zezingqalasizinda zemidlalo yama-Olimpiki Wasebusika, ezobanjelwa eBeijing. Kumshini wokuhlola ojantshi wesitimela phakathi kweBeijing neZhangjiakou, inhloko-dolobha yaseChina, [Okuningi ...]
Isitimela se-2 se-TCDD kulindeleke ukuthi sikhuphuke futhi ngemuva kwe-7 ngoDisemba, okuwusuku okwenziwa ngcono ngalo kanye nokulungiswa kwemisebenzi esiyiqalile ngoMeyi. I-Öncesi Ngaphambi Kwesitimela Esiphezulu, Adapazarı- [Okuningi ...]
I-TCDD, iHaydarpaşa kanye nezindawo zeSirkeci Station nezinye izakhiwo ezise ithenda okufanele zisetshenziswe emisebenzini yezamasiko nezobuciko ngemuva kokuba uMasipala wase-Istanbul Metropolitan ususwe ngokungemthetho kwi-ithenda yeHaydarpasa Solidarity, kubandakanya inyunyana yethu [Okuningi ...]
Ngesikhathi kubizwa iMeya yase-Istanbul Metropolitan u-Ekrem İmamoğlu, abameli abaningi bafaka icala eNkantolo Yezokuphatha Yesifunda ukuze kukhishwe ithenda lezindawo zaseHaydarpaşa naseSirkeci ezenziwe yiTCDD. Abameli, abafaka amathenda ngeHhovisi Lomshushisi Omkhulu Lase-Istanbul [Okuningi ...]
UMnu Cahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, uthe ingqalasizinda isebenza esigabeni seBursa-Gölbaşı-Yenişehir iyaqhubeka emkhakheni we-106 kilometre Bursa-Bilecek HT Project on Bursa-Bilecik (Osmaneli). I-Osmaneli line superstructure kanye ne-electrification-signaling-telecommunication (EST) [Okuningi ...]
UMnu Cahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, uthe imisebenzi yokwakhiwa kwemigwaqo iqhubeka ne-Adana-Osmaniye-Gaziantep High Speed ​​Railway Project ngobude bamakhilomitha angama-236. UTurhan uthe, seyahat Njengoba iphrojekthi ehlelelwe ukuqedwa e-2023, isikhathi sokuhamba phakathi kwe-Adana neGaziantep singaphansi kwamahora we-5 imizuzu engu-23 [Okuningi ...]
Ungqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda uM. Cahit Turhan, Konya, Karaman kanye noKayseri ukuze badlulisele lezi zimpahla eMersin Port kuhlelwe ukuthi kuzothuthukiswa ngokushesha umsebenzi weKonya-Karaman-Mersin-Adana HT, uzobamba iqhaza ekuthuthukiseni ezokuhamba kwabagibeli esifundeni. Ubude bamakhilomitha angu-423 [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda uM. Cahit Turhan uthe ku-2003, inethiwekhi yezitimela isiyonke, engamakhilomitha ayi-10 ayinkulungwane, ikhuphukile ngamaphesenti ama-959 ngesikhathi sokungenelela futhi yafika kumakhilomitha ayinkulungwane we-17. Ungqongqoshe Turhan, Halkalı- Iphrojekthi yeKapıkule HT [Okuningi ...]
Ezokuthutha kanye Ingqalasizinda uNgqongqoshe M. Cahit Turhan, Turkey ngokuvamile futhi unciphise amabanga e kwamadolobha 889 ayizinkulungwane amakhilomitha ephezulu ijubane izitimela ukuze lula ukuphila kwabantu (YHT), 786 ayizinkulungwane amakhilomitha ngesivinini isitimela (HT) futhi 429 angu ezivamile [Okuningi ...]
Isiteshi sesitimela saseHaydarpaşa sakhiwa e1906 II. Kwaqalwa ekubuseni kuka-Abdulhamid futhi kwaqedwa nge-1908. Isiteshi, esakhiwa yinkampani yaseGerman, sakhiwa e-III. Ibizwa ngegama likaHaydar Pasha, elinye lamaphashal aseSelim. Inhloso yokwakha, ujantshi wase-Istanbul Baghdad [Okuningi ...]
Imisebenzi yokwakhiwa kabusha yaqedwa ngesikhathi esifushane ngokubambisana kukaMasipala we-Metropolitan kanye noMasipala wase-ayaankaya eSakarya, eThessaloniki kanye naseDanube Street, okuyinye yezindawo ezihamba ngezinyawo kakhulu eKızılay. Ukusuka kwesitezi esikhulu ukuya ezigodini, kusukela ezihlahleni kuya kumabhentshisi okuhlala kuwo, le ndawo isanda kuvuselelwa. [Okuningi ...]
UMasipala we-Ankara Metropolitan uvuselela imijondolo egqokwa noma egqokwa e-Ankara Metro. Ukuqhubeka nokugcinwa kwayo, ukulungiswa nokulungiswa kwayo kusebenza kulo lonke leli dolobha, i-EGO General Directorate yoMnyango Wezitimela ihlinzeka ngezinto zokuhamba ezintofontofo nezingavikelekile. [Okuningi ...]
Iziteshi zakwaMetro ekungeneni kweminyaka engaphezu kwemibili zilinde isimo esishisayo semishini ye-x-ray nezitholi zeminyango yensimbi izolo, ziqale ukusebenza kancane. [Okuningi ...]
AbakwaSakalar namaScythi (I-Hired Old Anatolian People) akhawunti ye-Twitter, ngenkathi babelana ngemininingwane mayelana nenqubo yokwakhiwa kwesiteshi saseHaydarpaşa, isiteshi, kusho iphrojekthi yokuqala yoMbuso wase-Ottoman lapho kwenziwa inqubo yokuzenzela izwe. Amahlaya namaSkithe [Okuningi ...]
Umkhankaso owethulwe iphephandaba iBatman sonöz waqala ukuveza imiphumela ngesidingo sokuguqula inethiwekhi yesitimela, esebenza ku-Batman-Diyarbakır Railroad, lapho cishe abantu abayizinkulungwane ze-15 bahamba usuku nosuku, bangena ezimotweni zokuhamba. Abasebenzi bakwa-Batman-Diyarbakır abasebenzi bakajantshi bezitimela, ujantshi [Okuningi ...]